Madaxweyne Xasan “Dowladdu ma ogolaan doonto in carruurta loo adeegsado colaadda” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin in carruurta soomaaliyeed loo adeegsado dagaallada, isla markaana ay ka hortageyso cidkasta oo arrintan ku lug leh.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo shalay qalinka ku duugay heshiiska caalamiga ah ee dhowrista xaquuqda carruurta ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya aysan ogolaan doonin in shaqsiyaad gaar ah ay carruurta Soomaaliyeed u adeegsadaan dagaallada.
Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyarada ay yihiin lafdhabarka bulshada, loona baahanyahay inay ka qeyb qaataan horumarka dalka, oo aysan noqon kuwa si qaldan loogu adeegsado.
“Ma aqbali karno in markale dhalinyarada Soomaaliyeed laga dhigto xaabo dabka lagu shito, oo colaadaha lagu kiciyo, waxaan u taaganahay inay noqdaan furihii fur furayay dhibaatada Soomaaliya, isla markaana xir xirayay Nabadda, Midnimada iyo horumarka dalka, waxaan markale carruurta Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan ugu hambalyeynayaa in leeyihiin heshiis caalami oo ilaalinaya xaquuqdooda” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay waalidiinta Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xaquuqda carruurta, isla markaana si wada jir ah loogu istaago in carruurtu ay helaan xaquuqda aas aasiga u ah noloshooda, dowladduna ay arrintaasi gacan ka geysaneyso.
Howlgallo amniga lagu sugayo oo xalay laga sameeyay Degmada Hodan